Ny fahagagana fahaterahana indray - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Ny fahagagana amin'ny fahaterahana indray
Ka nateraka nateraka indray isika. Ianao sy ny tanjoko dia ny hiaina fiovana lehibe indrindra mety hitranga - fiainana ara-panahy. Nahary antsika Andriamanitra mba hahafahantsika mizara amin'ny toetrany masina. Ny Testamenta Vaovao milaza ny maha-andriamanitra masina azy toy ny solika iray izay manala ny fahalotoan'ny olombelona. Ary mila izany fanadiovana ara-panahy izany avokoa isika satria ny ota no nanala ny fahadiovana. Izahay ihany dia mitovy hoso-doko mitovy habe aminy isika. Tahaka ny sarimihetsika marobe feno fotaka maro be dia be, ny sisa tavela amin'ny fahotantsika dia nanerana ny fikasan'ny mpanakanto tsitoha.
Famerenana amin'ny laoniny ny kanto
Ny fanoharana amin’ilay sary hoso-doko maloto dia tokony hanampy antsika hahatakatra ny antony ilantsika fanadiovana ara-panahy sy fahaterahana indray. Nahita tranga malaza momba ny zavakanto simba izahay tamin'ny sarin'i Michelangelo teo amin'ny valindrihana ny Chapelle Sistine ao Vatican any Roma. Nanomboka nanamboatra ny Sistine Chapel tamin'ny taona 1475 i Michelangelo (1564–1508) tamin'ny faha-33 taonany. Tao anatin'ny efa-taona mahery kely dia namorona sary hosodoko maro izy niaraka tamin'ny sary avy ao amin'ny Baiboly teo amin'ny valindrihana efa ho 560 m2. Hita eo ambanin'ny sary hosodoko amin'ny valindrihana ireo sary avy amin'ny Bokin'i Mosesy. Ny motif fanta-daza dia ny anthropomorphic an'i Michelangelo (natao araka ny endrik'olombelona) an'Andriamanitra: ny sandry, ny tanana ary ny rantsantanan'Andriamanitra, izay mivelatra mankany amin'i Adama, lehilahy voalohany. Nandritra ny taonjato maro, dia niharan'ny fahasimbana ny fresco amin'ny valindrihana (antsoina hoe fresco satria nanao hosodoko teo amin'ny plaster vaovao ilay mpanakanto) ary norakofana vovoka tamin'ny farany. Rehefa nandeha ny fotoana dia ho rava tanteraka izy io. Mba hisorohana izany dia nankinin’ny Vatican tamin’ireo manam-pahaizana ny fanadiovana sy ny famerenana amin’ny laoniny. Ny ankamaroan'ny asa tamin'ny sary hosodoko dia vita tamin'ny taona 80. Namela ny marika teo amin'ny sangan'asa ny fotoana. Ny vovoka sy ny labozia dia nanimba mafy ny sary hosodoko nandritra ny taonjato maro. Ny hamandoana koa - ny orana dia niditra tao amin'ny tafon'ny Sistine Chapelle miporitsaka - dia nanimba ny asan'ny zavakanto. Angamba ny olana ratsy indrindra, na izany aza, dia ny mifanohitra amin'izany, ny ezaka natao nandritra ny taonjato maro mba hitahiry ireo sary hoso-doko! Nopetahana varnish vita tamin'ny lakaoly biby ilay fresco mba hanamaivanana ny faritra maizina. Na izany aza, ny fahombiazana ao anatin'ny fotoana fohy dia nivadika ho fanitarana ny lesoka tokony hofoanana. Ny faharatsian'ny sosona varnish isan-karazany dia vao mainka niharihary ny fandrahonan'ny hoso-doko amin'ny valindrihana. Ny lakaoly koa dia nahatonga ny fihenan'ny endrik'ilay sary hoso-doko. Any amin'ny toerana sasany dia nesorina ny lakaoly, ary nivaha koa ny poti-loko. Ireo manam-pahaizana nankinina tamin'ny famerenana ireo sary hoso-doko avy eo dia nitandrina fatratra tamin'ny asany. Nasiana solvents malefaka tamin'ny endrika gel. Ary tamin'ny fanesorana tamim-pitandremana ny gel tamin'ny alàlan'ny sponjy, dia nesorina ihany koa ny efflorescence mainty mainty.
Toy ny fahagagana izany. Ny fiainam-be sy ny maizina fresco dia efa velona indray. Ny famolavolana ny vokatra nataon'i Michelangelo dia namelombelona indray. Avy amin'izy ireo no namirapiratra hazavana sy fiainana indray. Raha oharina amin'ny faritra maizimaizina teo aloha, dia toa noforonina vaovao ny fresco voadio.
Ny famerenana indray ny sary hosodoko nataon'i Michelangelo dia fanoharana mety amin'ny fanadiovana ara-panahy ny fahotan'olombelona amin'ny fahotany noho Andriamanitra.Ilay Andriamanitra mpamorona no namorona antsika ho asany kanto sarobidy indrindra. Ny olombelona dia noforonina araka ny endriny ary tokony handray ny Fanahy Masina. Mampalahelo fa ny fahalotoan'ny zavatra noforoniny noho ny fahotantsika no nesorin'izany fahadiovana izany. I Adama sy Eva dia nanota ary nahazo ny fanahin'izao tontolo izao. Isika ihany koa dia mpanao kolikoly ara-panahy ary voagejan'ny fahalotoan'ny ota. Nahoana? Satria ny olona rehetra dia ota ary miaina ny fiainany manohitra ny sitrapon'Andriamanitra.
Saingy ny Raintsika any an-danitra dia afaka manavao antsika ara-panahy, ary ny fiainan’i Jesoa Kristy dia azo taratra amin’ny hazavana mivoaka avy amintsika mba ho hitan’ny rehetra. Ny fanontaniana dia hoe: tena te hampihatra izay ao an-tsain’Andriamanitra ho antsika tokoa ve isika? Tsy tian'ny ankamaroan'ny olona izany. Mbola miaina ny fiainany voaloton'ny ota ratsy ao anatin'ny haizina hatrany ny fiainany. Nilazalaza ny haizina ara-panahin’ity tontolo ity ny apostoly Paoly tao amin’ny taratasiny ho an’ny Kristianina tany Efesosy. Hoy izy momba ny fiainany taloha: “Hianareo koa dia efa maty tamin’ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay niainanareo fahiny, araka ny fanaon’izao tontolo izao.” ( Efesiana. 2,1- iray).
Izahay koa dia namela ity hery mpanao ratsy ity hanimba ny toetranay. Ary toa ny fresco an'i Michelangelo dia voasarona sy nolavin'i Russ, ny maizina koa dia nanjary maizina ihany koa. Izany no antony maha maika antsika ny hanomezana toerana ho anAndriamanitra. Izy no afaka manasa antsika ao, esory ny fahotan'ny ota ary manavao ny ara-panahy sy hamirapiratra.
Ny Testamenta Vaovao dia manazava ny fomba ahafahantsika mamorona indray ara-panahy. Manome analogie mifanaraka amin'izany izy hampahazava io fahagagana io. Tahaka ny tsy maintsy nanafaka ny fresco tany Michelangelo dia tsy maintsy hosasana ara-panahy isika. Ary ny Fanahy Masina no afaka manao izany. Manala antsika amin'ny fahalotoan'ny toetrantsika manota izy.
Na raha apetraka ao amin’ny tenin’i Paoly, izay niantefa tamin’ny Kristianina nandritra ny taonjato maro, manao hoe: “Nefa efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo, tamin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo.” (1. Korintiana 6,11). Io fanasana fanadiovana io dia asa fanavotana ary antsoina hoe "fanavaozana sy fanavaozana ao amin'ny Fanahy Masina" nataon'i Paoly (Titus). 3,5). Io fanesorana, fanadiovana na fanafoanana ny ota io dia aseho tsara amin'ny fanoharana momba ny famorana. Voafora ny fony ny Kristianina. Afaka milaza isika fa Andriamanitra amin'ny fahasoavany dia mamonjy antsika amin'ny fandidiana mba hanafaka antsika amin'ny fitomboan'ny homamiadan'ny ota. Ity fisarahan’ny ota ity – famorana ara-panahy – dia sarin’ny famelana ny fahotantsika. Nataon’i Jesosy ho tanteraka izany tamin’ny alalan’ny fahafatesany ho sorompanavotana tonga lafatra. Nanoratra toy izao i Paoly: “Ary niara-namelona anareo tamin’Ilay efa maty tamin’ny ota sy ny tsi-fiforan’ny nofonareo Izy, ka efa namela ny fahotantsika rehetra.” ( Kolosiana. 2,13).
Ny Testamenta Vaovao dia mampiasa ny tandindon'ny hazo fijaliana hanehoana ny fomba nanalana ny hery rehetra ananantsika mpanota tamin'ny famonoana ny tenantsika. Nanoratra toy izao i Paoly: “Fantatsika fa ny toetrantsika taloha dia niara-nofantsihana taminy [Kristy] tamin’ny hazo fijaliana, mba ho simba ny tenan’ny ota, ka tsy hanompoantsika ny ota intsony.” ( Romana 6,6). Rehefa ao amin'i Kristy isika dia ny ota ao amin'ny ego (izany hoe ny ego mpanota) dia voahombo na maty. Mazava ho azy fa mbola miezaka manarona ny fanahintsika amin’ny fitafian’ny fahotana ny olombelona. Miaro antsika anefa ny Fanahy Masina ary mamela antsika hanohitra ny fanintonan’ny ota. Amin’ny alalan’i Kristy, izay mameno antsika ny toetran’Andriamanitra amin’ny alalan’ny asan’ny Fanahy Masina, dia afaka amin’ny fanjakazakan’ny fahotana isika.
Ny apostoly Paoly no manazava io asan'Andriamanitra io amin'ny fampitana ny fandevenana. Ny fandevenana kosa dia mitaky fitsanganana ara-panoharana, izay midika ho teraka ankehitriny eo amin'ny toeran'ilay "antitra" mpanota "fahotana" vaovao. I Kristy no nanao ny fiainantsika vaovao, izay manome antsika famelan-keloka lalandava sy manome hery. Ny Testamenta Vaovao dia mampitaha ny fahafatesan'ny tenantsika taloha sy ny famerenantsika amin'ny laoniny ary ny fitsanganana amin'ny maty an'ohatra amin'ny fiainana vaovao amin'ny fahaterahana indray. Amin'ny vanim-potoanan'ny fiovantsika dia teraka indray isika ara-panahy. Vao teraka indray ny Fanahy Masina dia natsangana indray.
Nampianatra ny Kristianina i Paoly fa “tamin’ny haben’ny famindram-pony, dia niteraka antsika indray Andriamanitra ho amin’ny fanantenana velona tamin’ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty” (1 Pet. 1,3). Mariho fa ny matoanteny "ateraka indray" dia amin'ny fotoana tonga lafatra. Izany dia maneho ny zava-misy fa io fiovana io dia efa miseho eo am-piandohan’ny fiainantsika kristiana. Rehefa miova isika dia manao ny tranony ao anatintsika Andriamanitra. Ary miaraka amin'izay isika dia hamerina. Jesosy, ny Fanahy Masina ary ny Ray no mitoetra ao anatintsika (Jaona 14,15-23). Rehefa niova fo na nateraka indray isika – amin’ny maha olom-baovao ara-panahy antsika, dia mitoetra ao anatintsika Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra Ray no miasa ao anatintsika, dia toy izany koa ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Omen’Andriamanitra elatra isika, manadio antsika amin’ny ota ary manova antsika. Ary omena antsika izany hery izany amin’ny alalan’ny fiovam-po sy ny fahaterahana indray.
Ahoana ny fitomboan'ireo Kristiana amin'ny finoana
Mazava ho azy fa ny Kristianina nateraka indray dia mbola mampiasa ny tenin’i Petera hoe “toy ny zaza vao teraka”. Tsy maintsy “maniry ny ronono madion’ny saina” izay mamelona azy izy ireo, mba ho matotra amin’ny finoana izy ireo ( 1 Pet. 2,2). Nohazavain’i Petera fa ny Kristianina nateraka indray dia mitombo amin’ny fahiratan-tsaina sy ny fahamatorana ara-panahy rehefa mandeha ny fotoana. Mitombo “amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana an’i Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika” izy ireo (2 Pet 3,18). Tsy milaza i Paoly fa ny fahalalana bebe kokoa ny Baiboly no mahatonga antsika ho Kristianina tsara kokoa. Asehon’io kosa fa tsy maintsy ampitomboina bebe kokoa ny fahatsapantsika ara-panahy mba hahatakarantsika marina ny dikan’ny hoe manaraka an’i Kristy. Ny “fahalalana” amin’ny heviny ara-baiboly dia ahitana ny fampiharana azy. Miara-dalana amin’ny fanomezan-danja sy ny fahatsapan’ny tena manokana ny mahatonga antsika hitovy kokoa amin’i Kristy izany. Ny fitomboan'ny finoana kristiana dia tsy azo takarina amin'ny fiforonan'ny toetran'olombelona. Tsy vokatry ny fitomboana ara-panahy ao amin’ny Fanahy Masina ihany koa ny faharetan’ny fiainantsika ao amin’i Kristy. Mitombo kosa isika amin’ny alalan’ny asan’ny Fanahy Masina efa mitoetra ao anatiny. Ny maha-zava-dehibe an’Andriamanitra dia omena antsika amin’ny alalan’ny fahasoavana.
Mahazo fanamarinana amin'ny fomba roa isika. Amin'ny lafiny iray, voamarina isika na miaina ny anjarantsika rehefa mandray ny Fanahy Masina. Ny fanamarinana amin'ity fomba fijery ity dia mitranga ao anaty tampoka iray ary vita amin'ny alalan'ny Sorompanavotan'i Kristy. Saingy, mahatsapa fanamarinana ihany koa isika amin'ny fotoana izay ipetrahan'i Kristy ao amintsika ary manomana antsika hivavaka amin'Andriamanitra sy amin'ny fanompoana ao amin'ny asany. Na izany aza, ny toetra na ny "toetran'Andriamanitra" dia efa natolotra antsika rehefa mandray antsika ao an-trano i Jesôsy rehefa miova fo isika. Mahazo ny asan'ny Fanahy Masina manatanjaka isika rehefa mibebaka sy mametraka ny finoantsika an'i Jesoa Kristy. Ny fanovana dia atao eo amin'ny fiainantsika kristiana. Mianatra ny hampifanaraka ny tenantsika bebe kokoa amin'ny fahazavana sy ny tanjaky ny Fanahy Masina izay efa eo amintsika isika.
Andriamanitra ao amintsika
Rehefa teraka indray ara-panahy isika dia miaina ao anatintsika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina i Kristy. Azafady mba eritrereto hoe inona no dikan'izany. Afaka mahatsapa fiovana ny olona amin'ny alàlan'i Kristy izay mitoetra ao aminy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Andriamanitra mizara ny toetra maha-Andriamanitra antsika olombelona. Midika izany fa lasa kristiana vaovao tanteraka ny kristiana iray.
«Raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny taloha, indro efa tonga vaovao », hoy izy ao amin’i Paoly im 2. Korintiana 5,17.
Ny kristiana nateraka indray ara-panahy dia maka endrika vaovao - dia ny an’Andriamanitra Mpamorona antsika. Ny fiainanao dia tokony ho fitaratra amin'ity zava-misy ara-panahy vaovao ity. Izany no nahatonga an’i Paoly nanome azy ireo izao toromarika izao: “Ary aza mampitaha ny tenanareo amin’izao tontolo izao, fa miovà amin’ny fanavaozana ny sainareo...” (Romana 1.2,2). Tsy tokony hieritreritra anefa isika hoe midika izany fa tsy manota ny Kristianina. Eny, niova isika indraindray amin’ny heviny hoe nateraka indray tamin’ny alalan’ny fandraisana ny Fanahy Masina. Na izany aza, mbola misy ny "lehilahy antitra". Manao fahadisoana sy manota ny Kristianina. Tsy zatra manota anefa izy ireo. Tsy maintsy omena famelan-keloka sy fanadiovana lalandava amin’ny fahotany izy ireo. Araka izany, ny fanavaozana ara-panahy dia heverina ho dingana mitohy eo amin’ny fiainan’ny kristiana.
Ny fiainan'ny kristiana
Raha miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra isika dia mora kokoa kokoa amin'i Kristy. Tokony ho vonona hiala amin'ny ota isan'andro isika ary hanaiky ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fibebahana. Ary eo am-panaovantsika izany, noho ny ra soron'i Kristy, dia nandro antsika tsy tapaka amin'ny fahotantsika Andriamanitra. Sasao madio isika ara-panahy amin'ny akanjo feno ra an'i Kristy, izay midika ho ny Sorompanavotany. Amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka miaina amin'ny fahamasinana ara-panahy isika. Ary amin'ny fanaovana izany eo amin'ny fiainantsika, ny fiainan'i Kristy dia hita taratra amin'ny hazavana tarehintsika.
Nanova ny sary hoso-doko manjavozavo sy simba nataon'i Michelangelo ny fahagagana ara-teknolojia iray. Fa Andriamanitra dia manao fahagagana ara-panahy mahatalanjona lavitra ao amintsika. Mihoatra lavitra noho ny mamerina ny toetrantsika ara-panahy voaloton’izany. Mamerina antsika Izy. Nanota i Adama, namela heloka i Kristy. Milaza ny Baiboly fa i Adama no lehilahy voalohany. Ary ny Testamenta Vaovao dia mampiseho fa, amin'ny heviny hoe isika amin'ny maha-olombelona eto an-tany dia mety maty sy ara-nofo toa Azy, dia nomena fiainana tahaka an'i Adama isika (1. Korintiana 15,45- iray).
Im 1. Na izany aza, ny Bokin'i Mosesy dia milaza fa Adama sy Eva dia noforonina araka ny endrik'Andriamanitra. Ny fahafantarana fa noforonina araka ny endrik’Andriamanitra izy ireo dia manampy ny Kristianina hahatakatra fa voavonjy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy izy ireo. Noforonina araka ny endrik’Andriamanitra i Adama sy Eva tamin’ny voalohany, ka nanome tsiny ny tenany noho ny ota. Meloka noho ny ota ireo lehilahy noforonina voalohany, ary tontolo naloto ara-panahy no vokany. Ny fahotana dia nandoto sy nandoto antsika rehetra. Saingy ny vaovao tsara dia ny hoe afaka mahazo famelan-keloka sy hatsangana ara-panahy isika rehetra.
Amin’ny alalan’ny asa fanavotana nataony tao amin’ny nofo, dia Jesosy Kristy, no nanafahan’Andriamanitra antsika tamin’ny tambin’ny ota: ny fahafatesana. Ny fahafatesan’i Jesoa sorona no mampihavana antsika amin’ny Raintsika any an-danitra amin’ny alalan’ny famongorana izay nampisaraka ny Mpahary tamin’ny zavaboariny vokatry ny fahotan’ny olombelona. Amin’ny maha-mpisorona antsika, dia manamarina antsika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina i Jesoa Kristy. Ny sorompanavotan’i Jesosy dia mandrava ny sakana amin’ny fahotana izay nanapaka ny fifandraisan’ny olombelona sy Andriamanitra. Fa ankoatra izany, ny asan’i Kristy dia mahatonga antsika ho iray amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, ka izany no mahatonga antsika ho voavonjy. Nanoratra toy izao i Paoly: “Fa raha nampihavanina tamin’Andriamanitra tamin’ny fahafatesan’ny Zanany isika, fony mbola fahavalontsika, tsy mainka fa hovonjena amin’ny fiainany ankehitriny, rehefa nampihavanina.” ( Romana 5,10).
Nampitahain'ny apostoly Paoly ny vokatry ny fahotan'i Adama tamin'ny famelan-kelok'i Kristy. Tamin'ny voalohany, Adama sy Eva dia namela ny ota hiditra eo amin'izao tontolo izao. Nianjera tamin'ny fampanantenana sandoka izy ireo. Ary noho izany dia tonga tamin'izao tontolo izao izy miaraka amin'ny vokatr'izany rehetra izany ary nandray izany. Nolazain'i Paoly mazava tsara fa ny sazin'Andriamnitra dia nanaraka ny fahotan'i Adama. Niditra tao anatin'ny ota ny tontolo, ary nanota ny olona rehetra ka maty. Tsy ny sasany kosa maty noho ny fahotan'i Adama na nampita ny taranany tamin'ny taranany. Mazava ho azy fa ny fiantraikan'ny "nofo" dia efa misy fiantraikany amin'ny taranaka ho avy. I Adama no olona voalohany tompon'andraikitra tamin'ny niandohan'ny tontolo izay ahafahan'ny fahotana mivelatra malalaka. Ny fahotan'i Adama no nametraka fototra ho an'ny olona hanao zavatra bebe kokoa.
Toy izany koa, ny fiainan’i Jesosy tsy nisy ota sy ny fahafatesany an-tsitrapo noho ny fahotan’ny olombelona dia nahatonga ny rehetra ho afaka hihavana ara-panahy sy ho tafaray indray amin’Andriamanitra. "Fa raha noho ny fahotan'ilay Iray [Adama] no nanjakan'ny fahafatesana tamin'ny alalàn'ny Iray," hoy ny nosoratan'i Paoly, "mainka fa ireo izay mandray ny fahasoavana feno sy ny fanomezana ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana amin'ny alalan'i Jesosy tokana. Kristy » (andininy 17). Andriamanitra dia mampihavana ny olombelona mpanota amin’ny alalan’i Kristy. Ankoatr'izay, isika izay omen'i Kristy herin'ny Fanahy Masina dia hateraka indray ara-panahy ho zanak'Andriamanitra amin'ny teny fikasana lehibe indrindra.
Raha niresaka ny amin’ny fitsanganan’ny marina amin’ny maty i Jesosy, dia nilaza fa Andriamanitra dia “tsy Andriamanitry ny maty, fa an’ny velona” (Marka 1.2,27). Tsy velona ny olona noteneniny, fa efa maty, nefa satria Andriamanitra manana hery hanatratrarana ny tanjony, dia ny fitsanganan’ny maty, dia nolazain’i Jesosy Kristy fa velona izy ireo. Amin’ny maha-zanak’Andriamanitra antsika, dia afaka miandrandra ny fitsanganana amin’ny maty isika amin’ny fiverenan’i Kristy amim-pifaliana. Nomena fiainana isika ankehitriny, fiainana ao amin’i Kristy. Mampirisika antsika toy izao ny apostoly Paoly: “... minoa fa efa maty ny amin’ny ota hianareo, ary Andriamanitra velona ao amin’i Kristy Jesosy.” ( Romana. 6,11).